मोटरसाइकलमै चल्छ केदारको कपडा पसल ! भिडियोमा हेर्नुहोस्, ‘विदेश जानूभन्दा यहि ठिक’ – Gorkhali Dainik
मोटरसाइकलमै चल्छ केदारको कपडा पसल ! भिडियोमा हेर्नुहोस्, ‘विदेश जानूभन्दा यहि ठिक’
April 18, 2021 201
केदार सुनारको मोटरसाईकलमै कपडा दोकान चल्छ । उनले मोटरसाईकलमा विभिन्न थरीका कपडा राखेका छन् । यसरी मोटरसाईकलमा खोलिएको दोकान ग्राहकको दैलोसम्म पुग्छ । कोरोनापछिको लकडाउनपछि उनले मोटरसाईकलमा कपडा बेच्नथालेका हुन् ।
उनी सँगैका धेरै साथीहरु धेरै पैसा कमाउन विदेशिएका छन् । केहिले कमाएका छन् केहि उतै रमाएका छन् । वैदेशिक रोजगारले धेरैको पारिवारिक बिचलनै भएको छ । जसलाई उनले नजिकबाट नियालेका छन् । त्यसैले उनले नेपालमै दुख गर्ने निधो गरेका हुन् ।
काम गर्न सके नेपालमै सुन फल्ने उनको दाबी छ । दुख गर्न पछि नहट्ने केदार नेपालमै दुख गर्न सबैलाइ सुझाव दिन्छन् । यसरी कपडा बेचेर भएको फाइदाले उनको घर चलेको छ । उनी खुसी छन् । लकडाउनले नयाँनयाँ काम गर्न सबैलाइ बाध्य बनाएको उनको भनाइ छ ।
Prevलोकमार्गको जंगलमा फस्टाउदै देह-व्यापारः भर्खरका युवतीदेखि बिवाहित महिला सम्म भिडियो हेर्नुहोस
Nextभारतमा कोरोनाको नयाँ रेकर्ड, २ लाख ६१ हजार सङ्क्रमित, १५०० को मृत्यु
पूर्वी चितवनमा ट्याक्टर दुर्घटना, ५ जनाको मृत्यु
आफ्नो पतिको लिं’,ग ला मो भन्दै, सहन नसकी स,म्ब,न्ध वि,च्छे,द
भारतबाट उद्धार गरिएका ७ किशोरीलाई परिवारको जिम्मा लगाइँदैै !!
माछा व्यापारी…..पसल बन्द गरेर भागे…!
बर्दियामा बाघको फेरि आ”क्र,म,णबाट पुलिसराम को मृ;त्यु (7278)